यो यस्तो पारंपरिक कार बिना ठूलो शहर को बासिन्दा के उपचार होला छन् हाम्रो लागि अब कल्पना गर्न कठिन छ। तिनीहरूले हरेक परिवार मा गरिएको छ, र केहि मा दुई वा तीन कार बिना बाँच्न असम्भव छ। हामी हरेक दिन लगभग एक साथ शहर विभिन्न अंक मा हुन किनभने यो, अचम्मको छैन। यस्तो पनि महानगरबारे सडक मा कार को धारा सख्त नियम पालन गर्नुपर्छ, अन्यथा सबै यातायात अराजकता परिणत हुनेछ। एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यातायात नियन्त्रक, सबै चालक पालना गर्नु अनिवार्य गर्ने को, र एक ट्राफिक प्रकाश।
प्रकाश के हो?
प्रकाश संकेत को माध्यम द्वारा यातायात को प्रवाह नियन्त्रण जो Stoplight उपकरण भनिन्छ। यो मात्र कार हुन सक्छ, यातायात पानी र रेल परिवहन विषय हो।
यो उपकरण हामीलाई परिचित को धेरै नाम ग्रीक भाषा आउँछ र शाब्दिक अर्थ "प्रकाश bringer"।
ट्राफिक प्रकाश कहाँ गरे?
पहिलो यातायात प्रकाश एक सय र पचास वर्ष पहिले देखियो। यसको आविष्कारक सबै आफ्नो जीवन semaphores रेल लागि बाहिर काम गर्ने एक बेलायती इन्जिनियर थियो। यो पहिलो यातायात प्रकाश लगभग रेलवे semaphore पूर्ण प्रतिलिपि थियो अचम्मको छैन। उहाँले एक मानिस द्वारा संचालित छन् जो केही तीर, थियो। रात मा, शूटर देख्न सकेनन् गर्दा ट्राफिक प्रकाश ग्याँस मा चल्छ कि एक लालटिन मा गरियो। यो लालटिन दुई-टोन थियो, र यो त रातो र हरियो सामान्य संकेत स्थिर थियो। पछि तिनीहरूले स्वचालित यातायात प्रकाश आधार बन्यो।
पहिलो स्वचालित यातायात बत्ती
यसलाई माध्यम ग्याँस को आन्दोलन समायोजन लागि उपकरण धेरै खतरनाक थियो। इतिहास लिपिबद्ध ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने ग्याँस दीपक विस्फोट जहाँ अवस्थामा र कारण घाइते प्रहरी। तसर्थ, बीसौँ शताब्दीको सुरुमा त्यहाँ स्वचालित यातायात बत्ती को मोडेल थिए। सबै उपकरणहरू प्रयोगकर्ता-अनुकूल छन्। उदाहरणका लागि, तिनीहरू एक चालक नेभिगेट थियो जो मा शब्द राख्न गरिएको छ। अन्य अवस्थामा, यन्त्र सामान्य दुई रंग छ, तर एक दूरी मा प्रहरी शासन गरे। पहिलो हरियो तीर द्वारा प्रयोग भएको थियो यो त पालो बाँकी थियो।
पहिलो बिजुली यातायात बत्ती अन्तिम शताब्दीको बिसवां मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थापित। यो तीन रंग थियो र प्राथमिकता को सिद्धान्त मा काम गर्छ।
को सोभियत संघ मा यातायात बत्ती
को सोभियत संघ मा यातायात बत्ती को thirties सम्म सडक थियो। पहिलो उपकरण Leningrad पाइएको थियो, र बिस्तारै देश को शहर भर फैलियो। यातायात बत्ती दुई रंग, अलग तिनीहरूले अब के भन्दा प्रबन्ध छ। को sixties मा मात्र, अन्तर्राष्ट्रिय नियम, उत्पादन र बाह्य अभिशासित अपनाए थिए यातायात बत्ती को फारम।
त्यहाँ अहिले यातायात को प्रवाह ठीक गर्नु भनेर उपकरणहरू को नौ भन्दा बढी प्रकारका भन्ने तथ्यलाई बावजुद, सबै भन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय कार रोशनी छन्। तिनीहरूले तेर्सो र ठाडो हुन सक्छ, साथै दुई वा तीन रंग छ। अनुमति केही अवस्थामा पहेलो रंग रूसी यातायात को सबै भन्दा मा देख्न सकिन्छ कि सुन्तला द्वारा प्रतिस्थापन गर्न।
कार यातायात प्रकाश नियन्त्रण र एक चौराहे मा पैदल को आन्दोलन भने कुनै अन्य उपकरणहरू छन्। अक्सर, यो तीन गोलाकार संकेत भाग छ, तर केही मोडेल उज्यालो प्रदर्शन समय रिपोर्ट र वर्गहरु, हरियो तीर देखाउँदछ संग पूरक हुन्।
पदनाम यातायात बत्ती
यातायात संकेत सबै दुनिया भर नै हो। आफ्नो पदनाम बाल्यकाल देखि सिकाउनुभयो छन्:
रातो खण्डमा निषेधित;
पहेंलो prohibitive छ, तर आपतकालीन ब्रेक लगान को मामला मा खण्डमा अनुमति दिन्छ;
हरियो संकेत संकेत दिशा मा आन्दोलन गर्न अनुमति दिन्छ।
केही अवस्थामा, पहेलो संकेत अप साथ रातो संग रोशनी र इंगित गर्दछ कि चाँडै हरियो हल्का प्रकाश हुनेछ।
हरियो तीर - यो के हो?
कार को संख्या त्यहाँ थप खण्डहरू एक यातायात बत्ती सिर्जना गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले शहर को सबै भन्दा सक्रिय र जटिल Crossroads मा राखे। एक अनुभवी चालक गाह्रो आन्दोलन, जब हरियो तीर को सबै subtleties बुझ्न छ। तर यहाँ यो तपाईं दिशा मा सार्ने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ गर्दा र तीर बाहेक हरियो संकेत लागि प्रतीक्षा गर्दा थाहा गाह्रो छ, newcomers एक कठिन समय छ छ।
कार चलाउनु सही हुनेछ अघि यी चालकहरू सबै बुद्धि सिक्न। तर अवस्थामा पूर्ण भिन्न छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं एक सानो शहर मान्छे आए जहाँ र मेरो मुख्य घडी हकदार हुन सक्छ। यी शहरहरू त्यहाँ वस्तुतः कुनै Crossroads छ जहाँ ट्राफिक बत्ती हरियो तीर, समझ संग कठिनाइ पैदा। तर ऊ एकदम अनुभवी छ सोच्छ गर्ने ठूलो शहर चालक उत्प्रेरित गर्दा समस्या सामना र सडक मा दुर्घटना सिर्जना हुन सक्छ।
हरियो के तीर गर्छ?
हरियो संकेत मतलब अनुमति आन्दोलन, तर multiband संकेत को एक आन्दोलन को मामला मा सानो छ। तसर्थ, जहाँ लेपित हरियो तीर छुट्टै खण्ड थियो।
तपाईं पनि त्यस्तै यातायात देख्नुहुन्छ भने, मनमा राख्न हरियो संकेत मात्र कुनै तीर छ जहाँ दिशा मा अनुमोदक हुन्छ। हरियो तीर तपाईंले चाहेको निर्देशन मा रोशनी छ भने, र मुख्य हरियो अझै आगो छैन, यो आन्दोलन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तोड्न छैन भन्ने नियम।
नेभिगेट गर्न सजिलो तरिका, सही कहिले हरियो तीर। परिक्रमण यस पक्षमा मा कम्तिमा समस्या गराउँछ, र यो खण्ड लगभग सधैं रोशनी छ। यो मुख्य यातायात संकेत बिना एक सही पालो सबै समय मा अनुमति छ भन्ने हो। केही अवस्थामा, दायाँ पालो गर्न इशारा हरियो तीर, बन्द समय समयमा गर्दछ। तर यो सधैं मुख्य हरियो अघि केहि सेकेन्ड को लागि मा आउँछ।
बायाँ पालो गर्न हरियो तीर इशारा, धेरै चौबाटोहरु को आन्दोलन सुविधा। यो ड्राइभर मात्र scoreboard मा उनको उपस्थिति पछि युद्घाभ्यास सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। र, चौराहे मा बायाँ भएको ड्राइभर विपरीत पक्ष बाट सीधा यात्रा सबै वाहन छोड्न पर्छ। र मात्र पछि युद्घाभ्यास समाप्त गर्न।
हरियो तीर सीधा धेरै चालक perplexed। आखिर, अक्सर हरियो यातायात संकेत सही सधैं अनुमति मा यात्रा। हो यो छ, तर एक तीर जस्तै यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्। तपाईं यातायात बत्ती एक बायाँ गर्न योजना छ भने रोशनी छन् तर सीधा र सही गर्न इशारा मात्र दुई निर्देशनहरू, यो यो Crossroads मा बायाँ निषेधित चालु भन्ने हो। तपाईं आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न अर्को बाटो फेला पार्न हुनेछ।
साथै, हरियो ड्राइभिङ गर्दा लाभ को अभाव सीधा अंक तीर। त्यो तपाईं सही दिशा पास गर्न सक्छन्, तर विवाद अन्य मोटर चालकहरुलाई तरिका दिन पर्छ, छ। यो दुर्घटना जोगिन गर्न जान्न बिल्कुल आवश्यक छ।
कार - यो सिर्फ सार्न एक उपकरणको, यो नयाँ वा हुन सक्छ, तर यो सधैं चालक नियन्त्रण छ। ड्राइभिङ्ग स्कूल मा प्राप्त ज्ञान र सीप आफूलाई को सुरक्षा र अन्य सडक प्रयोगकर्ता मा निर्भर गर्दछ। र एक लामो समय को लागि रोशनी हाम्रो सडक मा सामान्य र आवश्यक उपकरणहरू छन् किनभने, तिनीहरूको मान एक वाहन चलाउनु हकदार भएको छ प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक छ पढ्न सही।
रकफेलर केन्द्र - मैनहट्टन शहर
Zavidovsky रिजर्व: विशेषताहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज
संसारको वन स्रोतहरू - मानिसजातिलाई प्रकृति को उपहार
लामखुट्टे छोराछोरीको बाइट्स: को धब्बा
दालचिनी संग snails। लागि नुस्खा
पर्खालहरु लागि कालो र सेतो र कालो वालपेपर। को भित्री मा प्रयोग को नियम
एउटा पाठ कागजातमा पृष्ठहरू कसरी नम्बरमा